ဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး က 'သူတို့ကိုဆက်ဆံခြင်း၊ စိတ်အားထက်သန်စေခြင်း' ကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရန်လမ်းညွှန် - သတင်း
ဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး က 'သူတို့ကိုဆက်ဆံခြင်း၊ စိတ်အားထက်သန်စေခြင်း' ကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရန်လမ်းညွှန်
သင်အမှန်တကယ်သင်သည်တစ်စုံတစ်ယောက်သို့အမှန်တကယ်ရောက်ရှိနေချိန်တွင်သင်သိသော်လည်းအလွန်စိတ် ၀ င်စားလိုစိတ်မရှိသောကြောင့်စာသားကိုတုံ့ပြန်ရန်သင်နာရီစောင့်ဆိုင်းနေသလား။ ဒါမှမဟုတ်သင်ကအလုပ်များနေဟန်ဆောင်နေတယ်၊ ​​သင်က Bridget Jones ကိုရေခဲမုန့်နှစ်ချောင်းပါသောအိပ်ရာပေါ်မှာထိုင်နေတုန်းပါပဲ။ yeah, ငါတို့ရှိသမျှသည်အဲဒီမှာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကနည်းပရိယာယ်များရရန်ကြိုးစားခြင်းသည်ဂန္ထဝင်ကစားသော်လည်း ၂၀၁၇ ဖြစ်သည် တကယ် ဂိမ်းကစားဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးလား။
အရ India Kang, အမျိုးသမီးများအတွက်ဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်သူ , 'သူတို့ကိုသူတို့ကိုဆက်ဆံပါဆိုလိုသူတို့ကိုစိတ်အားထက်သန်စောင့်ရှောက်လော့' 'နည်းလမ်း foolproof နှင့်တိုင်းအောင်မြင်သောဆက်ဆံရေးဟာသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်ဒီချိန်းတွေ့စည်းမျဉ်းအမှန်တကယ်လူတွေကိုအားထုတ်မှုလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိမဟုတ်သောသူတို့အပေါ်မှာစွမ်းအင်ဖြုန်းရပ်တန့်ကျိန်ဆို။
တစ်စုံတစ် ဦး ကသင့်ကိုစိတ်မရှည်လျှင်အိန္ဒိယကသင်၏တန်ဖိုးရှိသောအချိန်ကိုမဖြည့်ပါ။ သင်ရရှိရန်ခဲယဉ်းစွာကစားခြင်းသည်သင်၏ဘဝ၏အကောင်းဆုံးနှစ်များကိုတစ်စုံတစ် ဦး အားပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်အတွက်ဘာမျှမပေးနိုင်သောကြောင့်ထိခိုက်နစ်နာခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် 'သူတို့ကိုဆက်ဆံခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ သူတို့ကိုစိတ်အားထက်သန်စွာစောင့်ရှောက်ပါ' နည်းလမ်းကိုအမှန်တကယ်ကျွမ်းကျင်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ အိန္ဒိယမှတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လမ်းညွှန်မှုတောင်းခဲ့သည်။
အိန္ဒိယက The Tab ကိုပြောခဲ့သည်။ ငါတို့ကသူတို့ကိုမဆက်ဆံဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကကစားပွဲတစ်ခုဖြစ်လို့ငါတို့တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ချိန်းတွေ့တဲ့အခါမင်းကဆက်ဆံရေးကိုအရှိန်မြှင့်ဖို့ပဲ။ လူတွေကသိပ်များလွန်းတယ်၊
ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များကိုပထမလတွင်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်သာတွေ့ဆုံရန်သင်ကြားပေးသည်။ ၎င်းသည်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားဆက်ဆံရေးတွင်မတူညီသောအဆင့်များ၌ကျနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ မင်းတို့ကသူတို့ကိုများလွန်းလွန်းပါကမင်းရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုလျော့ကျစေပြီးလျင်မြန်စွာပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်။
သင်တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းကြောင့်သင်၏အသက်ကိုလက်မလျှော့ပါနှင့်
သင်၏အသက်တာ၌ပေါ်ပေါက်လာသည့်လူသစ်အတွက်သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအားလုံးနှင့်သာမန်လူမှုရေးဘ ၀ များကိုမဖယ်ရှားသင့်ဟုအိန္ဒိယကအကြံပေးသည်။ သူမသည်သူမ: သင်တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ကြောင့်သာသင်၏အသက်တာကိုအရှုံးမပေးချင်ကြဘူး။ သင်၏မိတ်ဆွေများကိုလက်မလျှော့ပါနှင့်၊ သင့်ကမ္ဘာကိုမစွန့်လွှတ်ပါနှင့်တစ်ချိန်လုံးမရရှိနိုင်ပါ။ သူတို့သည်သင်၏ဘဝ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
လူတော်တော်များများအမှားအယွင်းကြောင့်အခြားလူတစ်ယောက်ကိုသူတို့ဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတာအတိအကျသိစေဖို့စာပို့တာပါပဲ။ အဲဒီအစားသူတို့ကိုသင်လုံးဝမှာမကြိုက်သကဲ့သို့သူတို့ကိုဆက်ဆံသင့်သည်။ အိန္ဒိယအဆိုအရ coy ဖြစ်ခြင်းဆက်ဆံရေးလတ်ဆတ်ခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကိုစောင့်ရှောက်။
အိန္ဒိယကလူအများအပြားအမှားလုပ်မိခြင်းသည်အမှားတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အဆုံးတွင်လူတစ် ဦး ကိုအခြားသူတစ် ဦး ဦး အားစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အပြင်အခြားသူတစ် ဦး ဦး ထံသွားရာလမ်းသို့ရောက်သွားသည်။
ဉာဏ်စမ်းပဟေIZိ - သင်ဖန်တီးထားသော Dreamworks ကိုးကားချက်သည်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သောရုပ်ရှင်နှင့်ကိုက်ညီပါသလား။
Glasgow အနုပညာကျောင်းသူလေးနှင့်သူမ၏ကာလသွေးကို သုံး၍ ဆေးကြောပါ
Primark သည်စတိုးဆိုင်အချို့ကို ၂၄ နာရီအထိပိတ်ထားပြီးတဲ့နောက်မှာဖွင့်လှစ်နေပါတယ်
သင်စုဆောင်းမှုတွင်အလုပ်လုပ်ချင်ပါသလား? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကသင့်ကိုစောင့်နေတဲ့ #ladl hellscape ပါ
တစ် ဦး ဘော်စတွန်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလကျန်ရစ်ဖို့တစ် ဦး ကနယူး Englander ရဲ့လမ်းညွှန်
အဆင့် - ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ဝင်ငွေအမြင့်ဆုံးရရှိသည့်အလှအပသြဇာလွှမ်းမိုးမှု
ချစ်ခြင်းမေတ္တာကျွန်းအတင်းကော်လံ: စောင့်ပါ, အိန္ဒိယလိင်ကစားစရာ site ပေါ်တွင် ?? နှင့် Molly-Mae Tommy နှင့်အတူကအတုလား?